Ungayifometha kanjani i-iPhone futhi uyiyeke isanda kuphuma ebhokisini | Izindaba zamagajethi
UJose Rubio | | General, Izifundiswa
Akunandaba ukuthi i-iPhone yakho entsha sha isebenza kanjani, usuku olwesabekayo luhlala luza: kufanele ulufomathe. Kungenxa yokuthi ufuna ukususa idatha namafayela ahlala kwimemori yakho nokuthi ufuna ukuwasusa empandeni noma ngenxa yokuthi kwenzeke iphutha elibucayi ngesikhathi sokufakwa kohlelo lokusebenza noma okufanayo, kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuphatha inqubo. Ngakho-ke, ku-Actualidad Gadget sifuna ukuxazulula konke ukungabaza kwakho kule ndatshana, futhi sizokukhombisa yiziphi izindlela ezahlukene zokubuyisela i-iPhone.
Yebo buyisela. Into yokuqala okufanele uyazi ukuthi, uma ukhuluma nge-iPhone, i-Apple inqume kusukela ekwethulweni kwayo ukusebenzisa igama ukubuyisela esikhundleni sokufometha noma ukusula okuqukethwe kwe-iPhone. Ngakho-ke, kusukela manje kuqhubeke, zijwayeze lawa magama, njengoba uzowabona kaningi esifundweni sonke. Kunezindlela eziningana zokufometha i-iPhone yethu, futhi umehluko omkhulu usekutheni sinayo yini ikhompyutha, kungaba yi-PC noma iMac, efakwe i-iTunes.
1 Buyisela i-iPhone kwikhompyutha ene-iTunes
2 Buyisela i-iPhone kusuka kudivayisi uqobo
3 Ngabe ubona kuphela ilogo ye-Apple esibukweni?
4 Ngithole i-iPhone, ngingayifometha?
Buyisela i-iPhone kwikhompyutha ene-iTunes
Into yokuqala okufanele uyikhumbule yilokho lapho kubuyiselwa i-iPhone yethu sizolahlekelwa lonke ulwazi, okungukuthi, amafayela, izithombe, amavidiyo nezinhlelo zokusebenza kuzonyamalala ngokuphelele. Ngokuyinhloko i-iPhone izotholakala ilungele ukulungiswa njengomzuzu nje esiwukhipha ngawo. Ngakho-ke, kufanele sicacise ngezizathu zokuthi kungani sifuna ukubuyisela i-iPhone yethu, futhi sithathe izinyathelo ezidingekayo ukuze singazisoli ngemuva kokwenza kanjalo. Okokuqala kusobala: yenza isipele sedivayisi yakho, kungaba ku-iTunes uqobo noma ku-iCloud, ifu lika-Apple.
Ukungena odabeni, le ndlela imvamisa ivame kakhulu. Ngemuva kokuzithola sisesimweni lapho i- iselula ayenzi njengoba silindele, noma ngemuva kwesibuyekezo esisitholile iphutha elisivimbela ukuthi silisebenzise ngokujwayelekile, isisombululo esilula nephephe kunazo zonke ukubuyisela ngokusebenzisa iTunes. Kungashiwo ukuthi lokhu bekuyikho, ekuqaleni, okuwukuphela kwendlela yokubuyisela i-iPhone, futhi kuyindlela abantu abaningi abayisebenzisayo ukwenza kanjalo.
Isinyathelo sokuqala akuyona enye into ngaphandle kokuqinisekisa ufake inguqulo yakamuva ye-iTunes kukhompyutha yethu. Sixhuma i-iPhone yethu kwikhompyutha ngekhebula elisemthethweni le-USB-Lightning bese sivula i-iTunes. Sizokwazi ukuphatha idivayisi yethu ngesithonjana esisekhoneni elingaphezulu kwesobunxele, futhi lapho singabuka lonke ulwazi oluyisisekelo lwedivayisi.
Phakathi kwalo lonke lolu lwazi, kanye nemininingwane ephathelene ne-IMEI ne-Serial Number, sithola izinketho "Sesha isibuyekezo" ne "Buyisela i-iPhone". Kubalulekile kuleli qophelo ukuqinisekisa ukuthi sinesipele sakamuva kakhulu, ngendlela esiyithandayo. Njengoba isipele sesenziwe, sizoya ku- Amasethingi - ICloud - Thola i-iPhone Yami ukuyenza ingasebenzi futhi ngaleyo ndlela vumela ukubuyiselwa okulungile. Ngalesi sikhathi, singachofoza ku- "Buyisela i-iPhone", ngaleso sikhathi ukulanda kohlelo lokusebenza kuzoqala ngemuva. Njengoba kuthatha i-GB yesikhala, kuyinqubo ezothatha imizuzu embalwa, ukwazi ukusebenzisa i-iPhone ngenkathi ilanda, yize kunconywa ukuthi ungayithinti ngesikhathi senqubo.
Kanye okulandiwe, nangemva kokubalwa phansi kwesibili okuyi-10, ukubuyiselwa uqobo kuzoqala. Ngemuva kwemizuzu embalwa esishubile ngesikrini esimnyama, ilogo ye-Apple nebha yokuqhubeka, i-iPhone yethu izoqala ngendlela efanayo neyenze ngayo okokuqala, ilinde ukuthi siyilungiselele.
Buyisela i-iPhone kusuka kudivayisi uqobo
Kepha futhi sinenketho ye- buyisela i-iPhone ngaphandle kokuxhuma ku-iTunes futhi, ngakho-ke, kunoma iyiphi i-PC noma i-Mac. Inzuzo enkulu esingayisebenzisa lapho sisebenzisa le ndlela akukhona nje ukuthi ngeke sidinge ukusetshenziswa kwe-PC / Mac, kodwa futhi sizoqhubeka nokugcina inguqulo efanayo ye-iOS ebesinayo phambilini. Kodwa-ke, abantu abaningi bagcina ukuthi ukubuyisela i-iPhone kusetshenziswa le ndlela kungaholela kwimemori ukungakhishwa ngokuphelele namaphutha athile futhi imfucuza kuyo, kuncoma indlela ye-iTunes ngenhla kwalokhu, yize kungeyona into efakazelwe.
Kodwa-ke, uma sifuna ukuqhubeka, ngemuva kokuqinisekisa ukuthi senziwe isipele, sizobheka isigaba "Okuvamile" kuzilungiselelo ze-iPhone, ngemuva kwalokho sizokwehla ngemenyu size sithole inketho ethi "Setha kabusha". Le nketho yilapho singabuyisa khona i-iPhone yethu kuzilungiselelo zefektri, kepha futhi sinezinye izinketho zokubuyisela izilungiselelo ezithile ezithile.
Sawubona: Le nketho isusa kuphela izilungiselelo zedivayisi, kepha igcina idatha yethu iqinile.
Susa okuqukethwe nezilungiselelo: Izosula yonke idatha nezilungiselelo ku-iPhone. Kuyinto ehlukile ekubuyiseni idivayisi yethu kusuka ku-iTunes.
Setha kabusha izilungiselelo zenethiwekhi: Izosula zonke izilungiselelo zethu eziphathelene namanethiwekhi weselula, i-Bluetooth ne-Wifi, sikhohlwe amanethiwekhi we-Wifi okungenzeka ukuthi siwalondolozile. Khumbula ukuthi le ndlela ingathinta amaphasiwedi agcinwe kukhiye we-iCloud.
Setha kabusha isichazamazwi sekhibhodi.
Setha kabusha isikrini sasekhaya.
Setha kabusha indawo nobumfihlo.
Ngabe ubona kuphela ilogo ye-Apple esibukweni?
Yebo, kungenzeka futhi: ngemuva kokubuyisela okuwukuphela kwento oyibona esibukweni ilogo ye-iTunes, njengoba sibona esithombeni ngenhla. Esimweni esinjalo Singasebenzisa kuphela i-iPhone yethu futhi uma siyibuyisela nge-iTunes. Ukuze senze lokhu, kuzodingeka silandele kuphela izinyathelo esigabeni sokuqala salesi sifundo, kepha noma kunjalo, kuzofanele sikwenze phoqelela idivayisi ye-iOS ukuthi ingene kumodi ye-DFU noma imodi yokutakula ukuze ukwazi ukuyifinyelela kusuka ku-iTunes bese uqhubeka nokubuyiselwa okutholwa yi-iTunes futhi ukwazi ukuyibuyisela.
Mhlawumbe leyo Modi ye-DFU izwakala njengesiShayina kuwe, futhi kuyiqiniso ukuthi inqubo yayo iyamangaza, kepha yehlisa umoya ngoba akuyona into yokubhalela ekhaya. Kumele sixhume i-iPhone kwi-PC noma kwi-Mac ngekhebula le-USB-Lightning futhi cindezela inkinobho yasekhaya ngasikhathi sinye njengoba senza okufanayo ngenkinobho yamandla (IVolumu - Namandla we-iPhone 7 nakamuva) ngesikhathi imizuzwana emihlanu. Ngemuva kwalokho sizobamba kuphela inkinobho yasekhaya noma yevolumu -. Ngaleso sikhathi uma sikwenze kahle Ilogo ye-iTunes izovela nekhebula elibonisa ukuthi sikweleta i-iPhone kwi-PC noma kwi-Mac kuvulwa i-iTunes. Akuyona inqubo elula noma into esiyenza nsuku zonke, ngakho-ke kunzima ukukuthola, kepha ungakhathazeki ngoba ngemuva kwemizamo eminingana uzophumelela.
Izinketho ezinikezwa yi-iTunes lapho ithola i-iPhone yethu kumodi yokutakula ayilutho ngaphandle kokubuyekeza noma ukubuyisela, lapho kusobala khona sizokhetha ukubuyisela ukufaka kabusha uhlelo lokusebenza kusukela ekuqaleni. Ngeshwa, nge-iPhone kumodi ye-DFU ngeke sikwazi ukufinyelela kudatha yakhongakho-ke kuzofanele sivalelise kubo bonke, kepha ukuphela kwendlela esingagcina ngayo i-iPhone yethu. Kungakho sincoma ukwenza ikhophi kaningi.
Ngithole i-iPhone, ngingayifometha?
Impendulo esheshayo nelula ukuthi Yebo, ngokusebenzisa noma iyiphi yalezi zindlela ukuthi sikufundise ukuthi ungafometha i-iPhone. Impendulo ephelele: ngeke ikusize ngalutho. Kusukela kukhishwe i-iOS 7, wonke amadivayisi we-iOS axhunywe ku-Apple ID yomnikazi wawo, ngakho-ke uma ucingo selubuyisiwe, lapho kuqala inqubo yokumisa, i-iPhone izocela idatha yomsebenzisi efana ne-Apple ID ne-password ukuqinisekisa ukuthi ngumuntu ofanayo, ngakho uma ungeyena umsebenzisi wayo osemthethweni, izosebenza njenge-paperweight kuphela. Ngakho-ke into enengqondo ukuyenza ukuthi, uma usuthole i-iPhone, buza uSiri ukuthi "Ikabani le iPhone?" ukuze uthole imininingwane yokuxhumana nomnikazi wayo, futhi uma kungenzeki, iya esiteshini samaphoyisa ukuyiletha futhi itholakale. Uqinisekile ukumangala lapho uthola i-iPhone yakho elahlekile futhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungayifometha kanjani i-iPhone futhi uyiyeke isanda kuphuma ebhokisini
Ngine-tablet ye-ipad, futhi ihamba kancane kakhulu. Ingabe ingabuyiselwa kusuka efektri?
UJose Rubio kusho
Kunjalo! Indlela iyefana kuzo zombili i-iPhone ne-iPad. Uma uqaphela ukuthi isivele ihamba kancane, ungazama indlela yokuqala yesifundo, yebo, uqiniseke njalo ukonga idatha yakho kwikhophi eyisipele.
Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp kwikhompyutha yakho